"दिल तोडेर गयौ" लाइ ४ लाख भन्दा धेरै दर्शकको माया (भिडियो सहित) - ।। Naya Kuro ।।
१४ असार २०७६, शनिबार १४:२८ June 29, 2019 Naya KuroLeaveaComment on “दिल तोडेर गयौ” लाइ ४ लाख भन्दा धेरै दर्शकको माया (भिडियो सहित)
कुनै समय पाँचथरकाे फिदिममा युवा ब्यावसायीको छवी बनाएका सुरेन्द्र थेगिम हाल अमेरिकातिर बसाेबास गरिरहेका छन् । यसै क्रममा उनको शब्द रहेको गीत सार्बजनिक भएको छ । अमेरिकामै रहँदा कोरेका शब्दहरुलाइ संगालेर ‘दिल तोडेर गयौं’ बोलको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ । उक्त्त गीतमा जगदिश समालको स्वर रहेको छ ।
संगीत नारायण सुवेदीको रहेको छ। गीतको म्युजिक एरेन्ज फणीन्द्र राईले गरेका हुन्। भिडियोमा नायिका वर्षा राउत र नायक आकाश श्रेष्ठलाई प्रेम जोडीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। सँगै मोडेल निराजन प्रधानलाई वर्षाको श्रीमानका रूपमा देखाइएको छ।
बुद्ध थापाले छायांकन भिडियोलाई विकाश धमलाले सम्पादन गरेका हुन्। निकेश खड्काको निर्देशनमा तयार भएको यस भिडियोलाई दर्शकको साथ र सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भइरहेको छ । भिडियो रिलिज भएको केही दिनमा नै ४ लाख भन्दा धेरै दर्शकले हेरिसेका छन भने थुप्रै सकारात्मक प्रतिकृयाहरु प्राप्त भैरहेको थेगिमले सुनाए । म्युजिक भिडियो हेर्नुहोस
उत्तर कोरियाका शासक किमबारे तपाईंलाई थाहा नभएका १० रोचक गतिविधी
१५ फाल्गुन २०७५, बुधबार १३:३८ February 27, 2019 Naya Kuro
बाफरे ! सुर्के थैलीका बाबु छोरीलाई दर्शकको कत्रो साथ ?
२० माघ २०७५, आईतवार १७:४८ February 3, 2019 Naya Kuro